आर्थिक विकासको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र पारित  Hamrosandesh.com
आर्थिक विकासको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र पारित
काठमाडौँ, २१ चैत ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मुलुकको आर्थिक विकासको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र पारित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा दुई दिनसम्म बसेको राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकले मुलुकको आर्थिक विकासको पञ्चवर्षीय योजनाको आधार पत्र पारित गरेको हो।
५ वर्ष भित्र मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित सो योजनाको आधार पत्र पारित गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।
बिहीबार सम्पन्न परिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गरिवीको प्रतिशतलाई दोब्बर घटाउने लक्ष्य पनि लिइएको बताए।
आधार पत्रमा मुलुकको समृद्धिका लागि जलविद्युत उत्पादनमा विशेष जोड दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी बेरोजगारीको दरलाई ११ दशमलव ४ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच वर्ष भित्र ४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
उपाध्यक्ष कँडेलले गरिवी घटाउन र बेरोजगारीको दर न्यून बनाउन पूर्वाधार, जलविद्युत विकासमा विशेष जोड दिने योजना तय गरिएको पनि बताए। २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको सो आधार पत्रमा आगामी २ वर्षलाई समृद्धि र सुःखको आधार वर्षको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
उपाध्यक्ष कँडेलले योजनामा सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको अवधारणालाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको पनि बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आधार पत्रमा सामाजिक न्यायमा आधारित उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई अघि बढाउने भनिएको छ। परिषद बैठकले पारित गरेको सो आधार पत्र मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कँडेलले बलियो सरकार भएकाले सो योजनालाई गतिका साथ अघि बढाउन कुनै समस्या नहुने दावी गरे।